Ho fitsaboana ny Coronavirus: manana ny toerany ny fanafody raokandro malagasy | NewsMada
Ho fitsaboana ny Coronavirus: manana ny toerany ny fanafody raokandro malagasy
Anisan’ny nandray anjara fanazavana tetsy amin’ny CCO Ivato koa, omaly, ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, i Ahmad Ahmad, nanazava ny fitsaboana ny aretina Coronavirus. Nisy ny fampivoriana ireo manampahaizana sy ny mpikaroka malagasy toy ny eny amin’ny Imra ka nanaovana fakan-kevitra hitadiavana vahaolana amin’izao valanaretina izao.
Fantatra tamin’izany fa anisan’ny fanafody entina mitsabo amin’izao fotoana izao ny raokandro malagasy ary efa nentina amin’ireo hopitaly eny Anosiala sy etsy Andohatapenaka izany fitsaboana izany. Rehefa natao ny fanaraha-maso ny marary, hita fa nahatsara ny mararin’ny Coronavirus izany.
“Hatao mora ny fanafody mba ho takatry ny rehetra”, hoy ny minisitry Fahasalamam-bahoaka. “Fotoana tokony hisaintsainan’ireo manampahaizana malagasy sy ny mpikaroka izao vanim-potoana izao hikarohana ny fanafody mahomby hanasitranana tanteraka ny aretina Coronavirus”, hoy hatrany ny minisitra.